तपाईंले छान्नुभएको जीवनसाथीको व्यवहार यस्तो त छैन ? -
तपाईंले छान्नुभएको जीवनसाथीको व्यवहार यस्तो त छैन ?
VoiceNp	प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७ समय: १९:२६:१७
शब्द प्रेम सुन्न सजिलो छ र यसलाई सम्हाल्न सकिएन भने यो भोग्न गाह्रो छ । त्यहाँ धेरै जोडीहरू छन् जसले धेरै वर्षसम्म सँगै बसे पनि एक अर्कोलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनन् । यसको कारण यो हो कि लडाइँ र मानसिक विच्छेदनका कारण लामो समयसम्म सम्बन्धहरू टिक्न नसक्ने हुन सक्छ । त्यसकारण सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुअघि यो कुरा बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि तपाईंले रोज्नु भएको व्यक्ति तपाईंको लागि सही साझेदार हो वा होइन। केही मानिसहरु एकरदुईवटा भेटलाई आधार मानेर नै अर्काको बारेमा फैसला गर्ने गर्छन् । तर हुन सक्छ मानिसहरू सम्बन्धको सुरूवात केवल देखावटी प्रेमबाट गर्ने गर्छन् । जबकि कोही मानिसहरू वास्तविक प्रेम पनि सुरुदेखि नै गर्न सक्छन् । तर आफ्नो जीवनसाथी कसरी छान्ने त रु
के तपाईंको पार्टनरले तपाईंका बानीहरूलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ ?
यदि तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई मन पराउछ तर आज, भोलि वा केही दिनपछि तपाईंको बानी परिवर्तन गर्न आग्रह गर्छ भने त्यो सम्बन्धलाई समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने सम्बन्धको सुरुवातमा दुई व्यक्तिहरूले एक अर्कामा कुनै कमजोरी देख्दैनन् तर केही समयपछि तिनीहरू एक अर्काको बानी बदल्न चाहन्छन् । यदि तपाईंलाई पनि तपाईंको पार्टनरले यस्तै व्यवहार गरिरहेका छन् भने त्यो सम्बन्धको बारेमा केही समीक्षा गर्नै पर्छ ।
के तपाईंको रायलाई बेवास्ता गर्छन् ?
यदि तपाईं वा तपाईंको साथीलाई आफू जहिले पनि सही छु जस्तो लाग्छ भने वा आफूले कहिलै गल्ती गर्दिन जस्तो लाग्छ भने तपाईंहरूको बीच यही नै झगडाको कारण पनि हुन सक्छ । तसर्थ, आफ्नो पार्टनरले तपाईंमाथि आफ्नो निर्णय लाद्ने प्रयास गर्दैन र तपाईंको विचारलाई महत्त्व दिन्छ भने त्यस्तो साथीसँग जीवन कटाउन सजिलो हुन सक्छ । अन्यथा जीवनको कुनै न कुनै विन्दुमा गएर विवाद उत्पन्न हुन सक्छ ।
के तपाईंभन्दा कामलाई महत्वपूर्ण मान्छन् ?
तपाईंको साथी जसले तपाईंलाई भन्दा आफ्नो कामलाई धेरै महत्व दिन्छ भने ऊसँग जीवनबिताउन पनि समस्या सिर्जना हुन सक्छ । तपाईंको जीवनमा शोक र निराशा पैदा गर्न सक्छ। यद्यपि काम वा क्यारियर दुवै महत्वपूर्ण छ, तर यति धेरै छैन कि कामलाई बढी महत्व दिएर तपाईंले परिवारलाई समेत ध्यान दिनुहोस् । यहाँ धेरै व्यक्ति छन्, जो खुशी छन् वा दुखी, आफ्नो परिवार र काम दुवैलाई प्राथमिकता दिन्छन्। यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरमा कामलाई मात्रै धेरै महत्व दिन्छ भन्ने मान्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिसँग तपाईंले भविष्य नदेख्न सक्नुहुन्छ । किनकि कुनै सम्बन्धमा बलियो र फस्टाउनको लागि समान महत्त्व र समय आवश्यक छ।
के तपाईंको पार्टनरले व्यक्तिगत मामिलामा जान प्रयास गर्छन् ?
जब कुनै पनि सम्बन्ध सुरु हुन्छ, सबै कुरा राम्रो महसुस हुन्छ । यस्तो समयमा सायद कोही होला जो आफ्नो पार्टनरमा धेरै कमी देख्दछन्। त्यसोभए जान्नुहोस् कि यदि तपाईंको पार्टनरले तपाईंको व्यक्तिगत कुरामा प्रवेश गर्न कोशिस गर्छन् भने यस्तो साथीको तपाईंको लागि गलत हुन सक्छ । यी व्यक्तिहरू हुन् जो आवश्यक पर्दैन आफ्नो राय दिन आवश्यक मान्छन् र चाहन्छन् कि तपाईंको साथीको रूपमा तपाईं उनीहरूको कुरा सुन्नुहोस् वा उनीहरूको व्यक्तिगत मामलाका बारेमा सोध्नुहोस्।